Baarlamaanka maamulka Galmudug oo kulan ku yeelanayo magaalada Dhuso-mareeb – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaBaarlamaanka maamulka Galmudug oo kulan ku yeelanayo magaalada Dhuso-mareeb
Baarlamaanka maamulka Galmudug oo kulan ku yeelanayo magaalada Dhuso-mareeb
28/03/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Mar 28, 2018:- Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa kulankii ugu horeeyay ku yaalanaya Magaalada Dhuusa-mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, sida ay Warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka tirsan Xildhibaanada maamulka Galmudug.
Baarlamaanada maamulka Galmudug iyo Ahlusuna ayaa 26-kii bishan lagu mideeyay Magaalada Dhuusa-mareeb, kadib Munaasabad halkaasi ka dhacday oo uu ka qeyb galay Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf).
Kulanka waxaa shir guddoomin doona Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug Cali Gacal Casir, waxaana xalay xildhibaanada lagu wargeliyay in uu jiro kulan maanta oo Arbaco ah.
Baarlamaanka la mideeyay ee maamulka Galmudug iyo Ahlusuna ayaa waxa ay tiro ahaan gaarayaan 178 xildhibaan, ajandayaasha maanta la filayo in kulanka looga hadlo ayaa waxaa ka mid ah ka doodista wax ka badalka Xeer hoosaadka Baarlamaanka maamulka Galmudug, isbarashada Xildhibaanada labada dhinac iyo dib u eegista Dastuurka maamulka Galmudug.
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa xilligan wixii ka dambeeya waxa ay ku shaqeyn doonaan Magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galgaduud, maadaama heshiiska uu ahaa in kulamada Baarlamaanka lagu qabto magaalada Cadaado.
DAAWO VIDEO:- Sarakiisha gobolka Hiiraan oo ka hadashay deganada lagala wareegay Al-Shabaab
Dowlada Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlayo xiisada ka taagan magaalada Beled Xaawo